Translations < Myanmar (Burmese) < 4.5.x < GlotPress — WordPress
Translation of 4.5.x: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (1,826) • Untranslated (411) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
2014-09-01 10:44:44 GMT
2014-09-01 10:44:43 GMT
2014-09-01 10:44:50 GMT
Greetings Site Administrator! You are currently allowing &#8220;%s&#8221; registrations. To change or disable registration go to your <a href="%s">Options page</a>. မင်္ဂလာပါ ဆိုဒ် စီမံအုပ်ချုပ်သူ ! လတ်တလောအနေဖြင့် &#8220;%s&#8221; မှတ်ပုံတင်ခြင်းများကို သင်ခွင့်ပြုထားသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ထားရန် <a href="%s">ရွေးချယ်စရာ စာမျက်နှာ</a>သို့ သွားပါ။	 Details
မင်္ဂလာပါ ဆိုဒ် စီမံအုပ်ချုပ်သူ ! လတ်တလောအနေဖြင့် &#8220;%s&#8221; မှတ်ပုံတင်ခြင်းများကို သင်ခွင့်ပြုထားသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ထားရန် <a href="%s">ရွေးချယ်စရာ စာမျက်နှာ</a>သို့ သွားပါ။
2014-09-06 08:39:10 GMT